Nutii Oromoonnii biyya Hambbaa jirruu baa'een kenya baqattota Botolikaa mitii.
BY Rudassa Eshete 2001
Akkum isinuu xuqxxan hundda, eyyee hunddeen dadhabbii Oromoo biyya Faranjii fedhii qabenya horachuu waliin wal qabateetu jira. Nutii Oromoonnii biyya Hambbaa jirruu baa'een kenya baqattota Botolikaa mitii. Oromoonis haata'u Habashoonnii biyya Hambbaa jiran, baqatoota dinagddeetii. Namnnii dhugadhumattii Habashaa baqatee biyyaa ba'ee xiqqodha. Jarri kunis, namootii qabenya ga'aa otu qabanii rorroon itti hammaannaan baqatee biyyaa ba'edha. jarri akkasii baa'yee xiqodha. Yoo ittii yaadnnee illaallee, Oromootaa biyya alaa jiraataan akka kanaan gadiittii hiruu ni danda'ama.
1ffa. Warraa barumsaaf jedhanii biyyaa ba'anii achumaan hafan
2ffa. Warraa maqaa afeerraatiin biyyaa ba'anii achumaan hafan
3ffa. Warraa mootummaan Darggii alatti ergee achumaan hafan
4ffa. Warraa Dargiidhaaf hojjechaa turanii garuu Dargiin kufnaan Tirgee sodaatanii baqatan
5ffa. Warraa Maqaa Oromootiin jiruu ofii qajelfachuudhaaf jedhanii baqataa fakaatanii biyyaa ba'an
6ffa. Warraa Miseenssaa dhaba ABO fii kkf ta'anii karaa baqaa bekudhaan ba'an
Yoo jara kana ilaallee egaa, warrii Masterssiidhaaf biyyaa ba'anii PHDdhaaf itti fufanii sana boda biyyatti deeb'ii jibanii hafan, jiruu ofii tolfachudhaaf hafan malee Oromodhaaf jedhanii biyya Hambbattii hin hafnnee. Anum mataa koo dabalatee, namootii baa'een barumssaf biyyaa baanee alatti hafnne. Nus ta'e jarriin kanaan olitti xuqee fi kan hafanillee, jiruu mataa ofii tolfachudhaaf ijaa biyyaa baniif, qabssoo Oromoollee karaa irraa bu'aa ittiin arrggannuun yadnna jechudha. Namnnii bu'aa mataa ofiitii jedhee hojetummoo wal loluun isaa, wal jibbuun isaa, wal goomachuun isaa, wal sobuun isaa, wal mamuun isaa, wal gurguruun isaa, wal xaxee walkufisuun isaa beekamadha.
Dhugaa yoo dubbannee, namnnii Tirgeee jibbee Finfinnee irraa baqatee Amarikaanii hin dhaqu Bosona dhaqa malee. Namnnii Tirggee yookin Amara baqatee biyyaa ba'ee Amarikaanii dhaqee durbba Amaraa hin fuudhuu irraa baqata malee. Garuu, dhugaan jiru, Oromoon maqaa Oromootti qabatanii biyyaa Amarikaanii dhufan ba'een afaan Amaraa dubatu, durbba Tirggee, kan Amaraa yookin Guragee fudhuu. Isaan kaan Amara waliin suqii banatuu. Maqaa ofii gara Amaratti jijiratu.
Warrii maqaa Oromoo pasporttii godhatanii ittiinis visa arggatan, gaafaa Amarikaanii ga'anii calqabaniituu karaa barumssa ofii ittiin fixan, karaa makinaa har'aa ittiin bitatan, karaa mana bareedaa ittiin ijaarattan fii karaa ittii nama guddummaa ofii argisiisan soqachaa/barbaaddachaa olaanii bulu. Egaa jechii koo "the welfare of the diasporic Oromo" jedhuu yada akkasii irraa burqqe.
Mee maaliif ilmaan Oromoo magaalaa tokko kessa jiran ji'a tokkottii gaaf tokko wal arganii waan Oromoo hasa'uu dadhabuu jennee wal haa gafannu. Gaafii akkasii irraa deebiin nutii arrggannuu; Namootiin baa'een ijaa YEROO HINQABNNEEFII deebii jedhudha. Maalfii yeron Oromo jalaa badee Habashaadhaaf arrggamuu danda'ee? jennee yoo of gaafannemmoo, deebiin nuti ofii kennuu danddenyu mmoo, namootiin hunddii hin hojjetuu yookin, maa'ii waan Oromoo itti calu qabuu jechudha. Garuu, namnnii Oromodhaaf jedhee biyyaa baqate attamittii barumssa fii jiruu biraatiif carraa kennee waa'ee ittiin biyya baqatee hiraanfata? Hammas deebiin kenya, durumaa jarrii kun Oromodhaaf jedhanii biyyaa hin baaneedha.
Egaa,asinis jennu achiin, xumurri dubbii kenya, Oromoon baa'een bu'aa mataa ofii ari'aa olee bula kan jedhu ta'a. kanfan egaa " the walfare of the Oromo diaspora as a divisive element" jechuu fedhe.
18 Jun 2001, 3:55 AM